Mandoro ny Sambon’ny Andriamanitry ny Pesta I Taiwan · Global Voices teny Malagasy
Mandoro ny Sambon'ny Andriamanitry ny Pesta I Taiwan
Voadika ny 20 Jolay 2017 13:05 GMT
(Marihina fa tamin'ny 24 Jona 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Araka ny Taiwan.net,
Iray amin'ireo fombafomban'ny mponina an-dranomasina malaza any atsimo andrefan'i Taiwan ny fandoroana ny sambon'ny andriamanitry ny pesta. Tany am-boalohany, ny hamerina ny andriamanitry ny pesta any an-dranomasina miaraka amin'ny aretina isan-karazany no tanjon'ny fombafomba; ankehitriny, atao izany fombafomba izany mba hivavahana hisian'ny fandriampahalemana sy n fanambinana. Atao isaky ny telo taona ny lanonana, manodidina ny volana fahasivy ao amin'ny Tempoly Donglong ao Donggang. Dorana ireo sambo eo amin'ny tapaky ny volana fahefatra ao amin'ny Tempoly Sigang any amin'ny distrikan'i Tainan. Amin'ny ankapobeny, ny lanonana ao Donggang no tena lehibe indrindra. Ahitana hetsika goavana midadasika ireo fankalazana ireo ao amin'ny tempoly, izay miafara amin'ny fandorana ny sambon'ny andriamanitry ny pesta amin'ny andro farany fankalazana.
Maharitra valo andro sy fito alina ny lanonana fandoroana ny sambo ao Donggang . Araka ny fomba fanao, manomana vatsy hiomanana amin'ny dia ara-pombafomba ny mpino mahatoky sy ny mpandray anjara hafa alohan'ny handoroana ny sambo. Arehitra ny afo miredareda avy eo (mba hanerena ireo fanahy ratsy sy ny andriamanitry ny pesta mba hiakatra ao anaty sambo), ary dorana ny sambo raha sady mivavaka hisian'ny fandriampahalemana kosa ny olona.
Saingy tsy ao Donggang ( rohy Google Map ) ihany no mitranga ity fombafomba ity na any atsimo-atsinanan'i Taiwan fa hita amin'ny endrika isankarazany ihany koa any amin'ny tanànakely maro manodidina an'i Taiwan. Nanoratra ny iray tamin'izy ireo i YangPhoto tao Da Jiou (Tanàndehiben'i Pingdong), izay nampitainy tamin'ny fomba tsotra tao amin'ny bilaogin-tsariny:
Nanoratra i YangPhoto hoe:
Fombafomba kely mahafinaritra amin'ny fandoroana ny sambon'ny andriamanitry ny pesta izany.
Tsy latsaky ny ampolony mahery ny fotoana nakako sary io fombafomba io .
Kanefa tsy mbola nahita ny sambon'ny andriamanitra tsotra nefa miavaka tao an-toerana aho .
Ny sambon'ny andriamanitra dia vita amin'ny taratasy ary zakan'ny olona efa-dahy.
Nony maraina, nandeha fiara ho any amin'ny Tempoly Chao Feng aho rehefa avy naka sary ireo sambo mpanjono lamàtra tao amin'ny seranan-tsambo, izay any amin'ny tanànakeln'i Dajiou any amin'ny Tanàndehiben'i Pingdong.
Mpino am-polony no nanatrika ny fombafomba tao amin'ity tempoly ity, izay takon'ny fombafomba tao amin'ny tempoly manan-danja kokoa ary nahasarika mpino an'arivony.
Ny vatofantsika miendrika hazo fijaliana ?
Ny tavoahangin-tsaosy saozaha eo amin'ny sambo. Vita amin'ny taratasy ihany koa ny tantsambo sy ny mpiambina. Tsy hay ny hahavita tsotra noho izao.
Miaraka amin'ny filanjana miisa 4, lehilahy miisa 4 dia ampy mibata ny sambo vita taratasy an'andriamanitra
Mahazo aina tsara ny vehivavy mipetraka aorian'ny kamiao kely .
Zokiolona mifoka sigara sady mijery ny moron-dranomasina, eo am-piandrasana ny fizotry ny fombafomba fandorana ny sambon'ny andriamanitra .
10 minitra ihany dia vita ny fampidirana ny fanatitra taratasy ao anaty sambo.
Nitsiky ity zazavavy kely ity rehefa nalaiko sary eo akaikin'ny renibeny ary nanao “V” tamin'ny tanany izy sady menamenatra.
Aorian'ny lanonana ara-pivavahana, dorana avy hatrany ny sambo.
Ny ditin-kazo manitra nodorana manalavitra ny reniranon'i Gaoping…
Tena tony, tsy misy vahoaka, na olona misomebiseby mikorontana ny fombafomba ao amin'ny tempoly Chao Feng Tempoly Dajiou, Pingdong.
Mety tsy ho ela dia hanjavona miaraka amin'ny fotoana izany.
kanefa ny finoan'ny olona an-toerana izay latsa-paka ao amin'ny tany Taiwan,
dia tsy hiova na oviana na oviana ….
Ny sary rehetra nampiasaina tato amin'ity lahatsoratra ity dia nahazoana alalana avy amin'ny mpanoratra, YangPhoto.
Jereo ao amin'ny Flickr ity rohy ity raha hijery ny sarin'ireo fandoroana ny sambon'andriamanitry ny pesta ao Taiwan.
Hong Kong (Shina) 24 Aogositra 2021